トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Jereo ny fanoloana dian'ny Xintai ny pachinko trano izy
Indray andro tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko dia toy ny zava-nitranga lehibe Raha niresaka ny fanoloana Xintai, dia izay zavatra tonga teo amin'ny dian'ny momba ny indray mandeha ao anatin'ny iray na vitsivitsy volana amin'ny volana. Amin'izao fotoana izao tsy misy fiovana eo amin'ny zava-nitranga manan-danja mba hisarihana mpanjifa, fa matetika no lasa tsy ampy matetika azo ampitahaina. Misy ihany koa ny fitsipika ora iray nahafaka azy, fa ny dian'ny mba hanatanteraka ny fanoloana Xintai, ny toerana sy ny toe-piainana mpanjifa fototra, dia tsy mitovy amin'ny toe-javatra ny pachinko fandraharahana. Miteny ao amin'ny toerana
toe-javatra, ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ao amin'ny efi-trano sy ny pachinko anoloan'ny amin'ny gara any amin'ny faritra afovoan-tan?nan'i, Xintai fanoloana dia nentina avy isan-kerinandro. Ny antony fa izany no izany, any amin'ny faritra afovoan-tan?nan'i sy ny anoloan'ny gara, dia nanangana fifaninanana dia ny hoe niandry ny pachinko parlors dia mifantoka nanjary keriny. Xintai, dia lasa tena manan-danja entam-barotra, mba hisarihana mpanjifa.
pachinko manodidina ny efi-trano dia izao: raha ny fampidirana ny malaza ohatra be dia be ao, no ho ny toe-javatra tsy azo ialana ny riandrano izay mihazakazaka be. Mba hisorohana ny zava-misy, dia handeha ho manohitra amin'ny alalan'ny fampidirana maro mitovy ny isan'ny fampidirana ny manodidina ny toeram-pivarotana natao ny vaovao avy amin'ny mpanamboatra. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko afovoan-tan?na, toy izany tetika efa nanatanteraka isan-kerinandro, dia haingana ny fanoloana Xintai dia lasa bebe kokoa To haingana.
Na izany aza, dia ho pachinko milina ana hetsiny isan-Yen iray. Mba swap ny Xintai, dia mila mandany vola be izany. Raha vao haingana ianao no nampidirina 10 vondrona, dia ho tonga tarika an-tapitrisany Yen.
izany, ny zava-misy fa tandindomin-doza tonga toy ny fandaniana toy ny isan-kerinandro, ary ny fihenan-danjan'ny sy amortization, mba hampitombo ny vola miditra bebe kokoa, dia ny fandikan-teny izay tsy maintsy ho mendrika sitrana. Pachinko efi-trano, toy ny rojo fivarotana manana be dia be, fa tsy be loatra ny fahasitranany tanteraka, miaraka amin'ny hery ara-bola mafy pachinko parlors, mbola pachinko parlors dia nataonareo Xintai be dia be no tsy solafaka sitrana amin'ny fanarahana andro vitsivitsy fanoloana raha toa, misy ihany koa ny tranga izay ny fandidiana ho latsaka alohan'ny mandray ny tombony.
Ankoatra izany, dia efi-trano pachinko mpanamboatra, nifantoka tena mpifanolo-bodirindrina ao Tokyo prefektiora Efa. Kanefa kosa raha ny iray pachinko efi-trano ao an-afovoan-tan?nan'i, dia ny mpanjifa ny fikorianan'ny dia fifadian-kanina, tsy mahazo ny noterena hividy Xintai toe-piainana efa nahazo be dia be ny fanamiana. Mifanohitra amin'izany ny zava-misy suburban fivarotana, dia ho Xintai fanoloana ny antsasaky ny afovoan-tan?na fivarotana. Raha niresaka momba ny antony, tsy toy ny pachinko efi-trano tao afovoan-tan?nan'i, ary ny zava-misy fa kely fivarotana hifaninana eo amin'ny manodidina, dia ny olona tao clientele foibe, dia ilay ampahany izay tsy matetika be hetsika.
mifaninana satria midika fa ny antoko hafa tsy eo, ary koa manala ny fil?na ny hampidirana ny milina vaovao eo amin'ny tampon'ny maika. Ankoatra izany, mba manana base mpanjifa ihany koa ny raharaham-barotra lasa ny foibe tsy tapaka isika, dia mora ny fampidirana ny latabatra nampiasaina noho ny mijoro farany mitombo. Tamin'ny izany, fa tao afovoan-tan?nan'i solon'ny haingana sy ny tany manodidina ny pachinko parlors nahita ny antony mahatonga ny hafa, tsy tokony ho zava-doza raha fahasitranana haingana ho nampiditra Xintai varotra.
Xintai mpandehandeha ny fivarotana ny fanoloana dia, dia toy izany inona no tokony hatao, na famerenana napetraka mba hampiditra ny fandriana fo izany mba hifanaraka manodidina ny manao varotra, satria miakatra, dia misy ihany no manodidina eto mahita amin'ny alalan'ny fanamarihana ao amin'ny isan'andro .
dia ny varotra ambaratonga 'ny orinasa, dia toa maro ny olona izay tsy mitondra ny hevitra ny fisafidianana trano fisakafoanana tsara toy izany fomba fijery, dia aoka ny fahatsiarovan-tena kely. Xintai mpandehandeha ny fivarotana ny fanoloana izany, dia toy izany inona no tokony hatao, na famerenana napetraka mba hampiditra ny fandriana fo izany mba hifanaraka manodidina ny manao varotra, satria miakatra, dia misy ihany no manodidina eto mahita amin'ny alalan'ny fandinihana ao amin'ny isan'andro.
dia ny varotra ambaratonga 'ny orinasa, dia toa maro ny olona izay tsy mitondra ny hevitra ny fisafidianana trano fisakafoanana tsara toy izany fomba fijery, dia aoka ny fahatsiarovan-tena kely.